Ahoana no nanangonana vola 4 miliara dolara hanohanana ny fizahantany ny Kaomoro iharan'ny fahantrana? | Fahafahana mampiasa vola
Home » Vaovao momba ny famatsiam-bola fizahan-tany » Ahoana no nanangonan'ny Kaomoro iharan'ny fahantrana vola 4 miliara $ hamatsiana ara-bola ny fizahantany?
Ahoana no nanangonan'ny Kaomoro iharan'ny fahantrana vola 4 miliara $ hamatsiana ara-bola ny fizahantany?
Desambra 4, 2019
The firenena any Kaomoro dia ahitana nosy 3: Ngazidja, Mwali, ary Ndzouani. Raha ny filazan'ny The World Bank, 45 isan-jaton'ny mponina no latsaka ambanin'ny fahantrana.
Ny tsy fahampiana ara-pahasalamana, ny fanabeazana tsy dia tsara ary ny fitomboan'ny isan'ny mponina no antony lehibe mampisy ny tahan'ny fahantrana any Kaomoro. Izy io dia iray amin'ireo firenena mandroso indrindra eto an-tany, laharana fahatelo amin'ny farany ao amin'ny Global Hunger Index 2013.
Ka nanao ahoana Comores manangona vola mitentina 4 lavitrisa $ amin'ny famatsiam-bola, mihoatra ny telo heny ny haben'ny harinkarem-pireneny hamolavolana tetikasa stratejika eto amin'ny nosy Ranomasimbe Indianina?
Ny famatsiam-bola dia natentana tamin'ny fampiasam-bola, trosa ary fanomezana tamin'ny fivoriana tany Paris tamin'ity herinandro ity, hoy ny minisitry ny raharaham-bahiny Souef Mohamed El-Amine tamin'ny hafatra an-tsoratra, nefa tsy nanome ny antsipiriany.
Ny filoha Azali Assoumani dia nitarika ny tompon'andraikitra hitady vola hanampiana amin'ny fampiroboroboana ny harinkarena 1.2 miliara dolara miaraka amin'ny fampiasam-bola amin'ny fotodrafitrasa sy ny fizahantany, hoy ny minisitry ny toekarena Houmed Msaidie teo aloha. Comoro, nosy iray misy mponina 830,000 XNUMX eo anelanelan'i Mozambika sy Madagascar, dia manarina ihany koa taorian'ny fahasimbana nateraky ny rivodoza Kenneth tamin'ny volana aprily.
Assoumani dia nahazo ny laharana faharoa tamin'ny asany tamin'ny volana martsa taorian'ny nivoadiany handrisika ny fitomboan'ny harinkarena amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fizahantany. Tetikasa hafa natolotry ny Kaomoriana tamin'ny fihaonambe tany Paris ny angovo, ny arabe ary ny fananganana hopitaly oniversite.
Ny fivoriana dia natrehan'ny governemanta frantsay mpampiantrano, ary koa ny solontena avy any Sina, Japon ary Egypt. Ny vola Saodiana sy Koety, Fikambanan'ny Varotra Iraisam-pirenena ary ny Fikambanan'ny Firenena Arabo dia nanao fanekena famatsiam-bola.
Ny Kaomoro dia iray amin'ireo mpamokatra ylang ylang lehibe indrindra eto an-tany, fotony ampiasaina amin'ny ranomanitra, izay miaraka amin'ny jirofo sy lavanila dia mitentina 90% ny fanondranana azy amin'ny taona 2018, hoy ny banky foibe Comorian.
Ny mpitsidika rehetra ao Kaomoro dia takiana hanana visa. Ny teratany avy amin'ny firenena rehetra dia afaka mahazo visa rehefa tonga.